संयंत्र र माटो रसायन शास्त्र परियोजनाहरूका लागि विचार
संयंत्र र मिट्टी रसायन विज्ञान परियोजनाहरु
पौडी वा माटो रसायन विज्ञान समावेश गर्ने विज्ञान निष्पक्ष परियोजनाहरु धेरै लोकप्रिय छन्। लाइभ चीजहरू र वातावरणको साथ काम गर्ने वातावरणमा काम गर्ने मजा छ। यी प्रोजेक्टहरू एक शैक्षिक दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट हुन्छन् किनभने तिनीहरू अवधारणाहरूलाई विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरू एकीकृत गर्छन्। यद्यपि, यो सँधै निर्णय गर्न सजिलो छैन कि पौधे र माटो संग के गर्ने? यहाँ तपाईंको परियोजना को परिभाषित गर्न मद्दत गर्न केहि विज्ञान निष्पक्ष परियोजना विचारहरू यहाँ छन्।
केहि बोटनी र रसायन विज्ञान को सम्बन्ध मा, केहि केहि एक पर्यावरण विज्ञान स्लांट छ, र अन्य माटो रसायन विज्ञान हो।
रोपण र माटो रसायन विज्ञान परियोजना आइडिया स्टार्टर
विभिन्न किसानहरू कसरी बिरुवा बढ्ने तरिकामा असर गर्छ? त्यहाँ थुप्रै विभिन्न प्रकारका उर्वरकहरू छन्, जसमा अन्य सामग्रीहरूसँग नाइट्रोजन, फास्फोरस र पोटेशियम फरक मात्रामा हुन्छन्। तपाईं विभिन्न उर्वरकहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् कि तिनीहरूले कसरी बिरुवाको उचाइलाई असर गर्छ, यसको पातको संख्या वा साइज, फूलहरूको संख्या, ब्ल्लो गर्न समय, स्ट्यामको शाखा, रूट विकास, वा अन्य कारकहरू।
रंगीन mulch प्रयोग गर्दछ रोपण मा एक प्रभाव छ? तपाईं यसको उचाई, फलफूल, फूलहरूको संख्या, समग्र संयंत्रको आकार, वृद्धि दर, वा अन्य कारकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न कारकहरूले कसरी बीउ कोणको रोगलाई असर गर्छ? तपाईंले परीक्षण गर्न सक्ने कारकहरू तीव्रता, अवधि, वा लाइटको प्रकार समावेश गर्दछ, तापमान, पानीको मात्रा, केहि रसायनहरूको उपस्थिति / अनुपस्थिति, वा मिट्टीको उपस्थिति / अनुपस्थिति समावेश गर्दछ। तपाईं बीउ को प्रतिशत देख्न सक्दछ जुन उज्यालो हुन्छ वा किसिमको बीज जसलाई बीज बनाउँछ।
बिरुवाहरू कसरी तिनीहरूका बीच दुरीमा प्रभावित हुन्छन्? एल्लियोपैथी को अवधारणामा हेर्नुहोस्। मीठे आलुहरू बिरुवाहरू हुन् जसले रासायनिक (allelochemicals) लाई छोडिदिन्छन् जसले नजिकका बिरुवाहरूको विकासलाई रोक्न सक्छ। अर्को बिरुवा कस्तो मीठो आलुमा बढ्न सक्छ? बिरुवामा ईल्लियोसायनिकले कस्तो प्रभाव पार्छ?
के बीउको आकारबाट प्रभावित छ? के फरक आकारको बीउहरूमा विभिन्न अंकुरण दरहरू वा प्रतिशतहरू छन्? के बीजको आकार वृद्धि दर वा पौडीको अन्तिम आकारमा असर गर्छ?
ठण्ड भण्डारणले कसरी बीउको अंकुरणलाई असर गर्छ? तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्ने कारकहरू बीउको प्रकार, भण्डारणको लम्बाइ, तापमान भण्डारण, र अन्य चर, जस्तै लाइट र आर्द्रता समावेश गर्दछ।
कस्ता अवस्थाहरूले फलको पोषणलाई असर गर्छ? Ethylene मा हेर्नुहोस् र एक छापिएको थलो, तापमान, हल्का, वा अन्य टुक्रा वा फलको लागि निकटता मा फल संलग्न।
विभिन्न किसिमका मिट्टीहरू क्यान्सरबाट प्रभावित हुन्छन्? तपाईं आफ्नै हावा वा पानी बनाउन र मिट्टीमा प्रभावहरू मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग धेरै ठीलो फ्रीजरको पहुँच छ भने, तपाईं प्रभाव र स्थिर चक्र चक्रलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
मिट्टीको पीएचले मिट्टी वरिपरी पानीको पीएचसँग सम्बन्धित छ? तपाईं आफ्नो पीएच पेपर बनाउन सक्नुहुन्छ , मिट्टी को पीएच परीक्षण गर्नुहोस्, पानी थप गर्नुहोस्, त्यसपछि पानी को पीएच परीक्षण गर्नुहोस्। के दुई मानहरू समान छन्? यदि होइन भने, त्यहाँ उनीहरूको बीच सम्बन्ध छ?
काम गर्न को लागी एक केशिकमा कसरी नजिक छ? कुन कारकहरूले कीटनाशकको ​​प्रभावकारितालाई असर गर्छ (वर्षा? हल्का? हावा?)? यसको असरशीलता को बरकरार राख्दा तपाईं कसरी एक कीटनाशकलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ? प्राकृतिक कीट विनाशकारीहरू कसरी प्रभावकारी हुन्छन्?
बिरुवामा रसायनको प्रभाव कस्तो छ? तपाईं प्राकृतिक प्रदूषकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरणीय, मोटर तेल, व्यस्त सडकबाट रनको) वा असामान्य पदार्थहरू (जस्तै, सुन्तलाको रस, पकाउने सोडा )। तपाईं उपाय गर्न सक्ने कारकहरू बिरुवाको वृद्धि, पानाको आकार, रोपणको जीवन / मृत्यु, बिरुवाको रंग, र फूल / क्षमतालाई फलफूलको दर समावेश गर्दछ।
के तपाईं बढी विज्ञान निष्पक्ष परियोजना विचारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग अन्य प्रोजेक्ट विचारहरू छन् जसलाई विज्ञान मेला परियोजना विचार निर्देशिकामा सूचीबद्ध गरिएको छ, साथै पोस्टरहरू बनाउन, प्रस्तुतीकरणहरू, र वैज्ञानिक विधिसँग काम गर्ने सल्लाह।
ज्वाला परीक्षण कसरी गर्ने?
द्रुत क्रिस्टल विकासशील परियोजनाहरू
बेकिंग सोडा र सिरका बीचको प्रतिक्रियाको लागि समीकरण
रसायन विज्ञान मेला परियोजना विचार
क्रिस्टल विज्ञान मेला परियोजनाहरू
कैंडी रसायन विज्ञान परियोजनाहरु
चिनियाँ क्रिस्टल बढ्दो समस्याहरू
मध्य विद्यालय विज्ञान मेला परियोजनाहरू
11 कविता सबैलाई थाहा छ
खगोल विज्ञान र अन्तरिक्ष पत्रिका तपाईंलाई ब्रह्मांड देखाउनुहोस्
हृदयको अन्नामी: वाल्व
Stableford प्वाइंट प्रणाली बुझाउँदै
ओलम्पिक / सामान्य भन्दा कम वर्गहरूको परिभाषा
Astral प्रक्षेपण: तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ
अगस्त विलसनको क्यारेक्टर र सेटिङ विश्लेषण: 'बाड़'
पिफ्रेफर विश्वविद्यालय प्रवेश
यसो भन्छु "म तिमीलाई माया गर्छु": "ते अमो" वा "ते क्वेयर"?
Theseus र Hippolyta
एस्चेरियन सिरावेल: वास्तविक वा नकली?
10 योजनाहरु को लागि गर्म अप
काम्बो स्लाइस जीवनी
माउन्ट किनाबालु: बर्नियोको उच्चतम पर्वत
क्यामेरा ओवाकुरा र चित्रकारी
सबै भन्दा धेरै 10 भन्दा ठूलो चलचित्र एक्सेन्ट
स्कटिश उपनाम - अर्थ र उत्पत्ति
बायोड्रोग्रेडयोग्य वस्तुहरू साँच्चै ल्यान्डफिल्डहरूमा तोड्ने गर्छन्?
द लन्डन अफ द लन्डन
निकोटीन र वजन घटाने मा विज्ञान
लोचदार टकराव के हो?
वाइकिंग 1 र मार्क्स को वाइकिंग2मिशन
जान्नुहोस् कसरी कन्जुगेट गर्न "प्रेटर" (लोन) फ्रान्सेलीमा